ANTSIRANANA : Nitsidika ireo orinasa telo lehibe ny minisitry ny Indostria Tazafy Armand
Nanatanteraka fitsidihana ireo orinasa telo lehibe, izay manana ny maha izy azy aty amin’ny tapany avaratra ny Nosy, ny minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Tazafy Armand ny sabotsy 7 oktobra lasa teo. 10 octobre 2017
Nahitana ireo mpiara-miasa taminy, ny lehiben’ny faritra Diana ary natrehin’ny prefektioran’Antsiranana izany fitsidihana ireo orinasa aty Antsiranana izany. Anisany notsidihana tamin’izany ny orinasa Pfoi, izay orinasa manana ny toerany aty amin’ny oseana indiana amin’ny fanondranana hazan-dranomasina lamatra ireny. Azo ambara ihany koa fa amin’ny fisian’ity orinasa ity no ahatongavan’ireo sambo mpanjono aty Antsiranana.
Ankoatra izany ihany koa ny orinasa La Saline izay mamokatra sira, izay mamatsy eto amintsika hatrany amin’ireo Nosy rahavavy manodidina an’i Madagasikara. Tsy latsa-danja ihany koa ny fitsidihana ny orinasa Secren, izay tokana tsy manam-paharoa eto Madagasikara amin’ny fanamboarana sambo.
Araka izany dia tonga nijery sy namantatra ny zava-misy ary koa ny olana iainan’ireo orinasa lehibe mbola mihodina sady ahitana mpiasa mahery ny arivo no anton-dian’ny minisitry ny indostria. Nisy araka izany ny fanomezany toromarika mba hijerena miaraka ny vahaolana, indrindra amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fiainan’ny mpiasa any amin’ny orinasa.
Ny hahafahan’ireo orinasa lehibe ireo miantsehatra amin’ny fifaninanana amin’ny tsena anatiny sy ny iraisam-pirenena amin’ny vokatra izay vokarin’ny orinasa tsirairay no tanjon’ny minisitera tantaniny.